Tiyaatarka Mogadishu, waxaa ka socto Riwaayad la yiraa, “ Dowlad jilid ”=Faallo=
Tiyaatarka Mogadishu, waxaa ka socto Riwaayad la yiraa, “ Dowlad jilid ”, kan jilayo iyo kan Daawanayo wey wada ogyihiin in Riwaayadu ey tahay wax la jilayo oo eynana eheyn xaqiiq jirto, Jiluhna uma baahno in uu tixgaliyo rabitaanka Daawadayaasha.
Waxa aad Riwaayada ku soo gashay oo ey ku socoto waa Lacagtaadii si aad u daawato, kan jilayana sababta uu u jilayo waa in uu helo Lacagtaada aad Ticketka ku soo goosatay.
Dad Badan ayaa u sacbinaayo Riwaayada iyaga oo og, waxa la jilayo in ey Been yihiin , kuwa kale ayaa ooynayo iyaga oo Xasuusanayo xaalado Dowladeed oo mar hore soo maray.
Koox yar oo Bulshada ka mid ah ayaa Riwaayada u niyeeysano in ey dhab tahay ama haddii ey dhab ahaan leheeyd. Kuwaa kale ayaa ku dhax dhunsan Laba xaaladood oo kala ah “Run iyo Been”.
Dowladdu waxa ey jilee Been, Beentaasi kama socoto Tiyaatarka banaankiisa sida: Qeybo ka mid ah Magaalada iyo Gobalada. Haddii aad ka maqnaato Riwaayadda waxa aad ” Tiyaatar Dumis”.
Mu’alifiinta Riwaayada oo ah wakiilada Ajnabinta Caalamka oo kaliya, iyaga ayaa og Danta laga leeyahay Riwaayadaan, Markii ey doonaana u sheego Jilaha habka uu wax u jilayo, weliba iyada oo Amar iyo Canaana la isagu darayo Jilaha. Riwaayadu weey soconee inta Daawaduhu uu diyaarka u yahay in uu goosto Tickitka.
Riwaayadu Run ma ahan, Jilihu wadani ma ahan, Daawaduhu Dooq male, waxa ey wada jilayaan Dowlad aan jirin, ee Akhristoow Runta sheeg, adiga oo aan Mucaarad & Muxaafid midna la aadin. Meesha Dowlad ma ku heeynaa?.